Dimuqraadi iyo xukuumad
Xeerka la dagaalanka midabtakoorka ama cunsuriyadda
Habkaan ayaa dalka iswiidan lagu xukumaa
Dawlad, degmo iyo maamul gobol
Gobolka Stockholm, Degmooyinka iyo Siyaasadda
Boolis iyo maxkamad
Dimuquraadiyada Swiidhan waxay aasaasantey muddo 100-laal sanno ah. Koorsada qeybtan waxaad heli doontaa aqoon sida go’aanka uu baarlamaanku iyo kamuunku u gaadhaan iyo sida aad adigu uga mid noqon karto. Waxaad baran doontaa sidaad kamuunkaaga aad degan tahay uga qeyb qaadan karto iyo sidoo kale sida wada hadal ku sabsan diinta, xoriyda qowlka iyo xuquuqda aadamaha.
• Sidee loo maamulaa Swiidhan oo loo gooyaa go’aamada?
• Maxaan sameyn karaa si aan uga qeyb qaato meesha aan deganey?
• Sidee ayay u shaqeeyaan ururada bulshadu kuwee ayaase ka jira Swiidhan?
• Sidee ayaynu u wada noolaal karnaa inagoo kala fikrad duwan?